CloudCherry: Nzuzo zuru ezu maka ire ahia ndi ahia | Martech Zone
CloudCherry: Nzuzo zuru oke maka njem ndi ahia nke ndi ahia
Sọnde, Febụwarị 18, 2018 Douglas Karr
Njem ndị ahịa adịghị mfe dịka anyị ga-achọ ka ha dịrị. Na plethora nke dijitalụ na ọdịnala ọdịnala, atụmanya anyị na-agbanwe na ibiaghachi n'etiti isi mmalite ịchọta ngwaahịa na ọrụ ọhụụ, wee nyocha ma tụlee nzụta ha. Nke ahụ na-achọ ndị na-ere ahịa ka ha nwee ike ịme ihe ngwọta dị iche iche iji mee atụmatụ, tụọ, ma bulie njem ndị ahụ iji mụbaa ahịa, njigide, na ịkwado. Otu ngwungwu nke ndị ahịa na-eme njem njem ahịa dị CloudCherry.
Ihe osise nke ndi ahia na enyere ndi ulo oru aka iduputa atumatu a:
Chọpụta akara aka ndị ahịa gị kwuru.
Chọpụta oghere dị na mbọ ị na-agba ugbu a nke ga-eme ka nrụpụta ọrụ gị na ahịa ahịa gaa nke ọma.
Kwado gi ichota ndi ozo igha enweta.
Zụlite usoro njigide na-arụsi ọrụ ike iji chebe ndị ahịa ma bulie ọnụ ahịa ndị ahịa ha niile.
Chọta ụzọ iji jụọ ndị ahịa gị na-akwado gị iji mekwuo mbọ azụmaahịa gị ma bulie ahịa niile.
CloudCherry's Customer Journey Mapping Atụmatụ gụnyere ikike:
Chọpụta isi akara aka na ọkwa - Kedu ka ndị ahịa si etinye aka na ika gị? Ndi mmekorita a na eme na ntaneti? Na mgbakwunye na inyere gị aka ịmata ọkwa na ntụpọ, anyị na-enyere gị aka ịdepụta ha ka ị nwee usoro njem njedebe njedebe na-amalite.
Igodo igodo map nwere akara aka na nkebi - you na - achọ egwu Ntụle Ọkwá Ngwá Ọrụ n'ụlọ ahịa gị na akara ahịa ndị ahịa na ebe ịkpọtụrụ gị? Maapụ ọnụọgụ ndị a na ntụpọ aka na nkebi ka ị nwee nghọta doro anya na ihe ị na-enyocha n'oge nke njem ndị ahịa.
Mee nchịkọta njem - Nweta nghọta dị irè n'oge nke ọ bụla nke njem ahụ yana ndụmọdụ maka mmasị na ihe ndị na-adịghị amasị ndị ahịa, otu esi emeziwanye usoro iguzosi ike n'ihe dịka NPS, na akụkụ ndị ọzọ dị mkpa nke ahụmịhe ndị ahịa Leverage amuma amuma iji bulie njem ma hazie itinye ego na ntinye aka.
CloudCherry na-enye nghọta miri emi banyere mmekọrịta ndị ahịa na isi ihe mgbu na njem ahụ. Ndị ọchụnta ego nwere ike ịkwado usoro nyocha ha iji chọpụta ma lebara oghere dị iche iche anya na ahụmịhe ndị ahịa n'ofe ọwa dịka weebụsaịtị, ngwa ekwentị, ụlọ ahịa, ebe ịkpọtụrụ, na ndị ọzọ, iji mepụta njem ndị ahịa dị nro.
Tags: igwe ojiinjem ndị ahịanyocha ndị ahịa njemahịa njem nkewaahịa touchpointsnchịkọta njem
Ọkachamara Nhazi: Mepụta Ọdịnaya Eserese Dị Elu na Nkeji